Zụrụ PF 750 (959151-50-9) ndị na-enye ọrụ hplc> 98% | AASraw Fat Loss
/ ngwaahịa / Ọla abụba / PF 750
Rating: Category: Ọla abụba Tags: zụta PF 750, PF 750, PF 750 maka ire ere, PF 750 ndị na-eweta ngwá ahịa
PF 750 bụ ihe dị ike, oge na-adabere na ya, onye na-eme ihe na-enweghị ike imebi fatty acid amide hydrolase (FAAH) (IC50 = 16.2 nM) nke na-egosiputa ọrụ ọ bụla na ọtụtụ hydrolases ndị ọzọ. Ọ na-eji aka ya egbochi FAAH n'ime usoro nhụjuanya nke etiti. na IC50 na-eji 0.6 na 0.016 μM ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-aga n'ihu na FAAH maka 5 na 60 nkeji, n'otu n'otu. Fatty acid amide hydrolase (FAAH) bụ enzyme nke maka hydrolysis na inactivation
PF 750 vidiyo
I.PF 750 isi agwa:
aha: PF 750
Ụdị Mkpụrụkpụ: C21H32O
Ọbara arọ: 300.48
II. PF 750 ojiji na okirikiri:
2.How bu oru maka PF 750?
A na-enye PF-750 dị ka ntụ ntụ siri ike. Enwere ike ịme ngwongwo ngwaahịa site na ịmepu PF-750 na ngwakọta ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ ghara ikpuchi ya. PF-750 nwere ike ịmepụta ihe na-emepụta ihe dịka ethanol, DMSO, na dimethyl formamide (DMF). Solubility nke PF-750 na ethanol bụ ihe dịka 1 mg / ml na ihe dịka 20 mg / ml na DMSO na DMF. PF-750 na-edozi ngwa ngwa na nnukwu ihe ntanetị. Maka oke ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe dị iche iche, PF-750 ga-agbasasịrịrị na DMSO wee tụgharịa ya na nhọrọ ntanetị. PF-750 nwere ihe nkwado nke 0.125 mg / ml na 1: ngwanrọ 5 nke DMSO: PBS (pH 7.2) iji usoro a. Anyị anaghị akwado ịchekwa ihe ngwọta ahụ maka ihe karịrị otu ụbọchị.
3.Warning na PF 750
Maka mgbasa ka mma, kpoo tube ahụ na 37 Celsius C ma gbaa ya na mmiri bat. Ndị na-emepụta ihe dị iche iche nwere ụdị dị iche iche nke ngwaahịa ngwaahịa, naanị maka ntụle. Ọ bụrụ na ịta ahụhụ achọrọ maka nnwale ahụ dị oke ibu maka njedebe nke ngwaahịa ahụ, gbakwunye ihe nkwụnyekọ iji nyere aka gbasaa ma ọ bụ dozie onwe gị.
6. PF 750 Ezi ntụziaka:
IV. Esi zụta PF 750 si AASraw?
Buru onye mbu nyochaa "PF 750" kagbuo zara